Lego Trolls World Tour ဆောင်ပုဒ်ကြေငြာခဲ့သည်
08 / 05 / 2019 09 / 05 / 2019 ဂရေဟမ် 1352 Views စာ0မှတ်ချက် 2020, Lego, Lego trolls, Lego Trolls World Tour
အဆိုပါ Lego အုပ်စုသစ်တစ်ခုကြေငြာခဲ့သည် Lego ရုပ်ရှင်အခြေခံအကြောင်းအရာ၊ Trolls World Tour.
လူမှုမီဒီယာတွင် Lego Group မှကြေငြာခဲ့သည် Lego Trolls World Tour ပုံနှိပ်လိုဂိုနှင့်အတူ minifigure ခန္ဓာကိုယ်သုံးပြီး။
Trolls သည်ရိုင်းသောဆံပင်များဖြင့်အရုပ်တစ်မျိုးဖြစ်ပြီးမူလက 1959 ခုနှစ်တွင်စတင်ခဲ့သည်။ boost နှစ်ပေါင်းတိုင်းစုံတွဲလူကြိုက်များအတွက်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင်ဖြန့်ချိသောကာတွန်းရုပ်ရှင်သည် Justin Timberlake ကဲ့သို့သောဂီတနံပါတ်များနှင့်ဖျော်ဖြေပွဲများဖြင့်ဇာတ်ကောင်များကို CG ဘဝသို့သယ်ဆောင်ခဲ့သည်။
Trolls World Tour ၂၀၂၀၊ မတ်လ ၂၀ ရက်နေ့တွင်ဖြန့်ချိမည့်ရုပ်ရှင်သည်နောက်ဆက်တွဲဇာတ်ကားဖြစ်လိမ့်မည် Lego ဆောင်ပုဒ်သည်နောက်ရုပ်ရှင်အသစ်အပေါ်အခြေခံသည် Lego အုပ်စုသည်ဒီအသေးစားပုံကိုတင်ခဲ့သည်။ ဘယ်လိုအံ့သြဖွယ် Troll ဆံပင်အတွက်ပုံတူကူးယူလိမ့်မည် Lego ပုံစံ? ၎င်းသည်အစိုင်အခဲပလပ်စတစ်အပိုင်းအစတစ်ခုသို့မဟုတ်ဆံပင်ကို“ ခံစားရ” သည့်အမှတ်တံဆိပ်လော။
ဖြစ်နိုင်ချေအရှိဆုံးမှာဒီဆောင်ပုဒ်ကိုကာတွန်းအင်္ဂါရပ်အသစ်ရဲ့ ၂၀၂၀ အစောပိုင်းမှာစတင်မှာပါ။
← LEGO အတွက်ကြော်ငြာအသစ် Stranger Things
ထိုနေ့၏အုတ်ပုံ:“ သူမကိုယူသွားပါ” →